Aqoonkaab Faaidada caafmaad ku jirta Dhoolacadeynta. | Aqoonkaab
Faaidada caafmaad ku jirta Dhoolacadeynta.
Diinteen islaamku waxay meel wanaagsan dhigtay dhoolacadaynta. isagoo nabi moahmed SCW xadiis ku yiri .Walalkaaga muslimka ah wajiga u furfurtaa waa sadaqo .isagoo markaa uga jeeday inay dhoolacadeyntu tahay sadaqo aad ajar iyo fadli ku helayso .Sunahaa ka sokow waxaa ku qorsoon faaidooyin badan oo dhanka caafimadka iyo farxad ku nolaashiyaha dadka.
meelabadanoo dunida ah dhoolacedinta waxa loo isticmalaa daawo ahaan. alka dadbadani u isticmalaan so jiidasho ahaan .waxaa jiray actor caan ku noqday hal film oo aduunko dhan si wanaagsan looga daawaday maalin maalaha ka mid ah yuu nin wariya ahi doonay inuu waraysi ka aqaado .wuxu ugu yimi gurigiisa .marku ka so laabtey waraysigiina ka qaadey waxa uu yiri .markaan u yimi muqaalkisu imi cajabin balse waxaan gadaal ku ogaadey sirta uu ku noqday actorka ugu wanaagsan inay tahay dhoolacdeyntiisa.
Culimada cilmi nafsigu waxay shegaan markaso dhoolacadeyntaadu badato waxa aad yeelanaysaa cadow yar xita kuwa kugu cadowga ah way dilaysaa markay arkaan ado dhoolaceynaaya.
dadka dalal badano aduunka ah sida hindiya Germany dadkoodu waxay dhaqan ahaan u isticmalan dhoolcadeynta si aan loo garan waqtigay murugaysanyihiin .
Alkan kuma so koobikarno dhamaan faaidadeeda balse waxaanu isku dayi donaa inaanu ka hadalo waxna ka niraahno faaidada caafimaad Ee dhoolacadeynta kuwan oo xaqiijiyeen dhakhatiirka dunidu iskuna waafaqeen. ka bogosho wacan
1.Dheecaanka endorphins waxa la so daayaa xiliga dhoolacadeynta.
Dheecaankan wuxu firfircooni galiyaa in muruqyada wajigu si wacan u shaqeyaan.taso maskaxdu so turjunto .endorphins wuxu ka masuul yahay inaad dareento farxad.waxaxnu inagu caawiyaa n diiqada iyo murugadu heerkedu hoos udhaco kuna yaraato jidhka .
Dhoolacadeynta beenta ah iyo ta runta ah waa isku mid maskaxduna makala saaari karo .ta iska keenkenaka ah iyo ta dhabta ah .waxanay ka bixisaa isla hal dareen o isku mida .markasto jidhku so daayo endorphins waa marka ay koradho farxada raynraynta iyo raaxada intuba .
2.Dheecaanka endorphins dareen ahan ina siyaa .farxad iyo murugo yari
Sido kale wuxuu u shaqeeyaa inuu la dagaalamo xanuunka .dhoolacadeyntu waxay si wanaagsan umaamushaa xanuunka sida jabniinka lafaha .xanuunka muruqyada.
3.marka la so daayo dheecanka endorphins waxa hoos udhaca dheecaandka kale ee murugada cortisol,
.cortisol wuxu aad ushaqeynayaa .markaynu dareemayni murugo iyo warwar .wuxuna ka qaybqataa dareenada xun.hoos udhaca dheecankani wuxu hoos uridaa dareenada qalafsan.
4.dhoolacadeynta qosolka wadataa waxay si wanaagsan uga shaqaysiisa sanbabada.dhakhaatiirta caafimadka qaar ka mid ahi waxay ku tageen in dholacadeyntu tahay sida jimicsiga oo kale ,sida uu sanbabku ushaqeeyo marka aynu ku jirno jimicsiga u shaqeyaa waqtiga aynu dhoolacadeynta ku jirno .tasi waxay inoo cadeynaysaa in dhoolacadeynta tahay jimicsi waliba si fudud loo qaban karo.
5.waxay ka hortagtaa gabowga iyo duuduubka maqaarka gaar ahaan kuwa wajiga.
dhakhatiirta ku takhaustay maqaarku waxay sheegaan in qofba qofkuu ka dhoolacadeyn badanyahay ka qurux iyo waji qurxoonayahy.tano sababtay muruqyada daamanka oo si wanaagsan shaqadoodi uguta marku qofku dhoolacadeyn ku jiro, waxaa ka reeban qofka isticmaala mukhadaraadka iyo sigaarka,
6.Dhoolacadeyntu waxa kor uqadaa xasuusta,Cilmi baarayaal kale waxay soo daabaceen warbixin sheegaysa iyo qosolka uu sare u qaado xasuusta welib mideeda dhow, si sahlane wax u soo xasuusan karo hadii loo fiiriyo qofka murugeysa
culimada caafimaadku waxay sheegaan in qosolku yahay dawo lkn hadad iska qososho sabab la’aan adaa dawo u baahan.
Previous Post24 june MAANTA OO KALE MAXA DUNIDA KA DHACAY Next Post8 qodob oo ah inay hooyada uurka lahi ka taxadirto